Habraaca Doorashada Aqalka Sare Oo Lasoo Saaray (Akhriso) – Heemaal News Network
Waxaa lasoo saaray habraaca doorashada xubnaha Aqalka Sare ee baarlamaanka federaalka, shuruudaha, warqada anshaxa musharaxiinta u tartami doona Aqalka Sare iyo Akoon Bangi uu musharaxu ku shubayo Khidmada lacageed ee 20,000 oo dollar ah.
Qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federal ayaa lagu yiri, “Guddigu waxa uu la wadaagayaa codsi qoraal ah Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in ay u soo sharaxaan musharaxiinta Aqalka Sare ugu yaraan labo musharax kursi kasta, si waafaqsan shuruudaha xubinnimada golaha Aqalka Sare.”
Sidoo kale Guddiga ayaa qoraalkaan ku sheegay inuu qabanayo waraaqaha magacaabista musharaxiinta Aqalka Sare, iyagoo ka hubinaya shuruudaha musharaxnimada, isla markaana xaqiijinaya metelaadda qoondada haweenka ee30%.
Sida lagu shaaciyey qoraalka guddiga shuruudaha laga doonayo musharixiinta Aqalka Sare ayaa kala ah qodabadaan soo socda:
1 – In uu yahay muwaadin Jamuuriyadda Fcderaalka Soomaaliya
2 – In Dhimirkiisu dhan yahay
3 – In da’diisu aysan ka yarayn 25 sano
4 – In Ann xuquuuqdiisa muwaadinnimo go’aan maxkamadceed lagu hakin shanti (5) nano ee ugu danbeysay.
5 – Inuu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo u dhiganta.
6 – In uusan ka tirsanayn ama wax xiriir ah la lahayn kooxa argagixisada ah.
7 – In uu haysto waraaqda dembi la’aata ee hey’adda dembi baarista (CID) maamul goboleed ama mid federal.
“Mushamx kasta oou tartamaya Galaha Aqalka Sare waa in uu bixiyaa lacagta is diiwan-gclinta, kuna shubaa xisaabta bangiga ee Guddiga Doorashooyinka.”
1 – Lacagta is diiwan-galinta Musharaxiinta u tanamaya Aqalka Sare waxay noqonaysaa $20,000 (Labaatan kun oo dollar) musharaxiinta Golaha Shacabka $10,000 (Toban kun oo dollar)
2 – Lacagta is diiwaan-gelinta Musharaxiinta dib looma celinayo.
Ehelada Gabadhii Ubax Ee Oo sdai Arxan-daro ah loo Dhibaateeyay Oo Balan-qaad ka Helay Dawlada.
Beesha Reer Awkhudub Oo Raali Galin Ugu Tagtay Xassan Sheekh
Maxkamad Xukuntay Sharci Dhibaya Soomalida Maraykanka Ee Aan Sharciga Haysan
Rooble Oo Booqday Askartii Ku Dhaawacantay Dagaalka